Yintoni ekufuneka uyiqwalasele ukuba uya kuzisa yakho kwi-intanethi
Ukuba ufunda yethu Indlela yokukhokela ekuqaliseni umboniso wakho weentetho kwaye unqume ukuba intshona yasentshona yewebhu kwihlabathi jikelele apho ungathanda ukuqalisela inguqu yakho ye -Tonight Show okanye i -Daily Show , nantsi izicebiso ezimbalwa kunye neengcinga ukukunceda ufumane ukubonisa kwakho umhlaba kunye newebhu.
Isinyathelo sokuqala? Khangela ukuba unako oko kuthatha.
1. Ukuqonda oko kuthatha ukuba ube ngumboniso womdlalo
Ngaphambi kokuba ufumane iimbono ezinqwenelekayo zokuba yinto elandelayo elandelayo ukusuka kuZach Galifianakis wathenga amabini ama-fern kwaye wamema uMongameli waseUnited States ukuba ahlale phakathi kwabo, kufuneka uyenze into ethile yokuqala kwaye uqinisekise ukuba unokwenza ntoni ukuba ube ngumboniso weentetho umphathi.
Oko kuthetha okungakumbi kunokuba ne-charisma yokuba ngumncedisi othakazelisayo kunye nexesha elihlaziyiweyo lokubulala 'em izihlalo. Kuqonda umgangatho wakho wokusasazwa. Oko kuthatha ukuphumelela kumabonwakude-okanye kule ngxaki, kwi-intanethi. Olu lwazi lweziseko lobugcisa luyakukuvumela ukuba wenze umboniso ofikelela ngaphaya kwemidlalo yevidiyo kwi-YouTube. Kwaye kunokukhokelela kwizinto ezinkulu kunye ezingcono.
2. Ukuqonda oko kuthatha ukuvelisa umboniso weentetho
Oku kuthatha isigwebo esivela kwisigwebo esinokugqithisileyo kumhlathi wokugqibela weli candelo langaphambili. Yonke into ephathelele "ulwazi olusiseko lobugcisa." Oko sithetha ntoni ngolu hlobo kuthatha iiklasi kwividiyo kunye nemveliso ye-TV. Le mihla, iiklasi zokuvelisa ziyafumaneka phantse nayiphi na iikholeji zasekuhlaleni kwaye mhlawumbi zikhona iiklasi zecandelo labucala kwiindawo zokuqeshisa ikhamera, amanethiwekhi okufikelela kumabonwakude nakwi-intanethi. Olu lwazi lwesiseko malunga nendlela yokwakha umboniso, ukuyila isethi, ukuhamba kweprogram, ukubeka iikhamera zakho, ukukhanyisa iindwendwe kunye nokunye okunjalo kuzakuvumela ukuba wakhe into ekwahlukileyo kwimibono yakho kunye nobugcisa kunoma ubani oyifumanayo.
3. Phuhliso lwakho ngcamango
Uyazi ukuba unayo i-chops, uyayiqonda indlela yokuvelisa iphupha lakho, ngoku uvelise ingcamango. Kwaye kulo mzekelo, masibe nenjongo yokubonisa yonke imbonakalo. Yonke into esiyifaka ngayo kwiNkqubo yokuQala iNtetho yakho yokuThetha . Yiyiphi ifomathi eya kuba, ngubani na iindwendwe eziza kubakho, ukuba yinto yendabuko okanye ukuba yinto ethile entsha kunye eyahlukileyo.
Emva kokuba zonke ezo ziqwenga kunye, sekuyisikhathi sokuqala ukufaka ifomathi into ethile eya kudlala kakuhle kwiwebhu.
Oko kusilethela ukuba sibambelele amabini: Ukulungela iwebhu.
4. Cinga ngendawo
Ukuba ukhetha ukuvelisa umboniso weentetho olandela ifomathi yendabuko yeendwendwe ezihlukeneyo kunye nezihloko, ngaphezu kwamathuba akho, umboniso wakho uya kulahleka kwi-clutter. Ababukeli beentetho ze-intanethi badla ukutya umxholo wevidiyo ngendlela efanayo abadla i-podcasts okanye iiblogi okanye ezinye izinto ezisemgangathweni. Abalandeli beencwadi zeComic bangabuka phantsi kwe-Pete's Basement, umzekelo. Ukuba uthatha isigqibo sokuba uwonke jikelele, qwalasela ukuvelisa iziqephu kunye nezihloko ezithile. Itheyibhile Incoko yenza umsebenzi omkhulu walo. Isiqephu ngasinye sinomxholo othize, njengexesha lokuhamba okanye amava okutya okugqithisileyo okanye i-TV ye-90. Itheyibhile Ncokola iquka iinkalo ezimbalwa ngokubonisa, ukunika iindidi, kodwa ezi zihloko zibanceda ababukeli bafumane umxholo wabo.
5. Khetha lakho usasazo ekhaya
Ingaba yi-YouTube, i-Vimeo okanye iwebhusayithi yakho eyakhelwe ngabanye - nokuba i-Facebook, iVine okanye i-Twitter-inqume ukuba uza kubamba indawo yakho. Kwaye ke, sithetha ukutshala iflegi emhlabathini uze ubize bonke abalandeli bakho apho. Ngoxa ucinga ukuba ufuna ukuthumela umboniso kwiindawo eziliqela kwaye wabelane ngeziqhagamshelwano kwi-media media, ufuna ukunika ababukeli indawo abanokukufumana ngaso sonke isikhathi .
Isiseko sekhaya, ukuba uya kuthanda, apho bafunde khona ngemiboniso ezayo, iindwendwe kunye nokunye.
Kwaye ukuba umsebenzi wokupapasha i-episode yakho yakutshanje kwiiplatifomu zevidiyo ezihlukeneyo ezimbini zibonakala ziphazamisayo, akukho nto ixhalaba kuyo. Amasayithi afana ne-TubeMogul anokukunceda ukusabalalisa umboniso wakho kwiwebhu.
6. Faka umfanekiso wekhnoloji
Kubantu abaninzi, oku kungayona nto inzima. Ukuvelisa umboniso weentetho, kufuneka ukwazi ukuba ufumanisa njani le ngcamango ukusuka kwiphepha ukusetha kwisikrini. Inxalenye yesikrini ithetha ukuthabatha izixhobo zevidiyo ezifanelekileyo kwaye wazi kakuhle indlela yokuyisebenzisa. Ngokuqinisekileyo, uya kuba yingcali njengoko uya khona, kodwa kufuneka ufike ngaphaya kwesigaba sokuqala ukuba ufuna ukuvelisa into abantu abaya kuyibuka.
Yilapho iiklasi ezimbalwa kwiikholeji yasekuhlaleni yakho, isikhululo sokufikelela esidlangalaleni, isitoreji sekhompyutheni, okanye isasazo esikolweni kuya kukunceda ukuba ubonise okulungileyo kwezinto onayo.
Ekugqibeleni, masifumane loo mboniso emoyeni.
7. Yenza umboniso wakho - ezimbalwa zazo
Asiyi kungena ekuveliseni umboniso wakho kule kholomu, kodwa siya kukuxelela oku: qiniseka ukuba ufumana inombolo elungileyo yomboniso, ulungiswe kwaye ukulungele ukuthumela phambi kokuba uqale ukuthengisa inkqubo yakho. Khumbula, uya kuba nomsebenzi we-9 ukuya kweyesihlanu ngelixa uzama ukuqalisa umboniso wakho weentetho, ngoko ke kufuneka ube nesicwangciso sobhengezo.
Ukuba umboniso wakho uya kusasazwa ngeveki, qwalasela ifilimu enye okanye ezimbini ezinokubaluleka kwezibonakaliso eziqhelekileyo zonkqantosi-iinkqubo kunye neendwendwe ezinobuchule beengcali ezilungileyo naluphi na lweveki-kukukunceda uqhubeke neshedyuli yakho. Ngaloo ndlela, ungaphuthelwa ngeveki okanye ezimbini kwaye unayo into yokubonisa.
8. Fumana abaphulaphuli bakho!
Xa umboniso uphakamise kwaye usebenza, uya kufuna ukutsala abaphulaphuli. Unokwenza loo ndlela endala-kwiintengiso kwi-intanethi apho ukholelwa ukuba abaphulaphuli bakho bafihlile-kodwa akukho ndawo ngaphandle kwentlalo. Cwangcisa ekusebenzeni, ngeyona nto incinci, iphepha le-Twitter ne-Facebook. Kulapho ungahlala uxoxisana nabalandeli bakho, abalandeli kunye namalungu abaphulaphuli. Kwakhona, zidibanisa iiforam kwaye ulandele iiblogi, uvula intetho kunye nabanini beblogi kunye neforum eziqhelekileyo ukwenzela ukwakha okulandelayo.
9. Hlaza uphinde uphinde
Impumelelo kwi-intanethi ibonisa ukugcina ishedyuli eqhelekileyo. Banikezela ngolwazi oluqhubekayo kubalandeli kunye nabalandeli. Ngokukhawuleza xa uthumela umboniso, phuma uphinde ukhuthaze. Kwaye ngelixa wenza njalo, qalisa ukusebenza kwisiqendu esilandelayo. Abalandeli bakho balinde!
Kulungile, enye yokugqibela ibuyele eqinisweni.
Nangona uvelisa umboniso ophezulu, umgangatho wokufundisa kunye nokuzonwabisa, ithuba liza kutshabalalisa isizwe kwaye uyayeka umsebenzi wakho wosuku kakhulu. Ngoko ukuba ukhona kuloo - welllll, unokuba ufuna ukucinga enye injongo. Kodwa ukuba ukhona kuba unomdla ngeengcamango zakho kwaye awukhathalele ukuba ngaba wenze ipenny? Ewe, ke, hlala, uphumule kwaye ujabule! Kwaye siya kudlala ngokuzonwabisa.
Ingaba ngumfazi wokuqala wokuqala u-Einstein?
Indlela yokushiya imiyalezo kwiNombolo yeNgesi
Izicelo zeIncyhurensi yengqesho
I-Theresienstadt: "Umzekelo" weGhetto
Ukuhlaziywa (iigama zentsingiselo)